Wasiirka ganacsiga oo hortagay xildhibaannada golaha shacabka – Kalfadhi
Wasiirka ganacsiga iyo maalgeshiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa maanta xildhibaannada golaha shacabka ka hor akhriyay akhrinta koowaad ee hindise sharciyeedka Shirkadaha oo golaha horyaalla.
Hindise sharciyeedkan oo ay xukuumadda soo ansixisay 19-kii bishii Febraayo ee sanadkan ayaa imminka horyaalla baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaannada golaha shacabka ayaa hindisehan marsiin doona laba akhrin ka hor inta cod lagu ansixin.
Baarlamaanka Soomaaliya waxaa weli horyaalla hindise sharciyeedyo badan oo ay hore u soo meel marisay xukuumadda federaalka.
Shirka daah furka ololaha dib u eegista dastuurka oo beri ka furmaya Muqdisho